तपाईको आज - Khabar24Nepal	Khabar24Nepal	तपाईको आज - Khabar24Nepal
काठमाडौँका सीडीओ शर्मा दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
नगर प्रमुख केसी द्धारा आठविकोट नगरपालिका १३ का पहिरो पिडितसँग भेटघाट
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका चार खेलाडीलाई कोरोना
उपत्यकामा थप १६१५ जना कोरोना पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट थप १७ जनाको मृत्यु
थप २३६४ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या १ लाख ६४ हजार ७ सय १८ जना
लकडाउडनमा सडकमा खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई खाजा सहयोग
भ्रमको खेती गर्ने भरत दाहाललाई दिए अशोक चौलागाईले चेतावनी
नौ पेज लामो ”सुसाइड नोट” पछि आत्महत्या
नेपालगन्जकाे क्वारेन्टाइन ताेडफाेड गरि फरार भएका ११ जना जाजरकोटमा फेला
काेराेना कोरोना भाइरस राेल्पा रोल्पा नेपाल प्रहरी नेपालगञ्ज कोरोना पक्राउ राेल्पा रुन्टीगढी प्युठान
पढ्न लाग्ने समय : ४ मिनेट
वि.सं. २०७५ साल फागुन ५ गते आइतबार। इश्वी सन् २०१९ फेब्रुवरी १७ तारिख। नेपाल संवत् ११३९ सिल्लाथ्व। माघ शुक्लपक्ष। तिथि– त्रयोदशी, २६:३२ बजेउप्रान्त चतुर्दशी
आवेशमा काम गर्दा विवादमा परिनेछ। परिस्थिति सोचेजस्तो अनुकूल नहुन सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना देखिन्छ। ईर्ष्या गर्नेहरूले काममा अवरोध पुर्याउन सक्छन्। आफ्ना सामानमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्। हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले समस्या पर्ने देखिन्छ। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला।
बृष ( इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो )
चिताएका काममा बेलैमा योजना बनाएर प्रारम्भ गर्दा फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने काममा मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। प्रयत्न गर्दा राम्रै अवसर जुट्नेछ। साथीभाइले राम्रै सहयोग जुटाउनेछन्। पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो योजना प्रारम्भ होला। व्यापारमा लाभ हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ।
मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह )
अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ। वचन पुर्याउन नसक्ता आलोचित बन्नुपर्ला। परिस्थिति सबल नदेखिए पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला। आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ।
अवसर प्राप्त भए पनि बलजफ्ती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउनेछ। केही कठोर निर्णय लिनुपरे पनि चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। भेटघाट र खानपानमा समय व्यतीत हुनेछ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग पुनर्मिलन हुनेछ। आफ्नो स्वामित्वका वस्तुमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्।
आकस्मिक खर्च बढ्नेछ भने आम्दानीका स्रोत कमजोर बन्नेछन्। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ। सोचेको नतिजा तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ। तापनि पहिलेका कमजोरी सच्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ। बसाइको स्थानान्तरण वा टाढाको यात्रा सम्भावना देखिन्छ।
कन्या ( टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो )
अवसर प्राप्त भए पनि परिस्थितिवश केही समस्या समेत देखा पर्नेछन्। कामको राम्रै मूल्यांकन भए पनि आम्दानी बढाउन निकै मिहिनेत पर्नेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ। प्रतिफल हातपार्न केही समय लाग्नेछ। महत्त्वपूर्ण काम बीचमा रोकिनाले आयआर्जनमा समस्या पर्न सक्छ। सरसापटमा धन बाहिरिनेछ भने घरखर्च बढ्नाले कर्जा लिनुपर्ने हुन सक्छ।
तुला ( र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते )
पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने प्रयत्न गर्दा उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ। नियमित कामको अलमलले नयाँ क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकिएला। तापनि सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। पहिलेको सफलताले पनि हौसला प्रदान गर्नेछ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुनेछन्। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ।
बृश्चिक ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु )
मेहनत परे पनि भाग्यले राम्रै अवसर दिलाउनेछ। चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन् भने अवसर तथा सफलताले पछ्याउनेछन्। टाढिएका मित्रगण नजिकिनाले प्रसन्नता मिल्नेछ। समुदायको हितमा विशेष काम गर्न सकिनेछ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। अभाव हट्नुका साथै दाम, नाम र इनाम प्राप्त हुनेछ। धार्मिक अनुष्ठान र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ।
धनु ( ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे )
परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा कार्यसम्पादनमा समय लाग्नेछ। अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। आकस्मिक समस्याले शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। चिताएको काम बिग्रनाले निराशा छाउनेछ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि समस्यामा परिनेछ। फजुल खर्च बढ्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुग्ने देखिन्छ।
मकर ( भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि )
घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। मानसम्मान प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। अर्थअभावले सताउन सक्छ। मानसम्मान प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ।
कुम्भ ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द )
पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ भने पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् र मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। परिश्रम परे पनि लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। शत्रु र रोगबाट भने सजग रहनुपर्ला। विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
मीन ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि )
सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् भने मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। व्यापारमा फाइदा र पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। लगनशीलताले अप्ठ्यारो परिस्थितिसमेत सहज बन्नेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने चिताएको काम बन्नेछ।
श्रोत नेपाली पात्रो
सरकारले स्थानीय तहसम्मै पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने
माता पाथिभराको दर्शन गरि दिनको सुरुवात गर्नुहोस
थप १९५४ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या १ लाख हजार ६२ नाघ्यो
८ जना प्रहरीको हत्या गर्ने मस्ट वान्टेड दुवेलाई खोज्दै भारतीय प्रहरी बाँकेमा
थप ३ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या २४९
नयाँ नक्साबारे गर्मा गर्मी !
अन्तर्मनका तरङ्गहरू संयुक्त गजल सङ्ग्रह लोकार्पण हुदैं
24 नेपाल मिडिया प्रालि
ठेगाना : काठमाण्डौ १६, नयाँ बजार
ई-मेल : khabar24nepal2075@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं :246/075/076.
Khabar24Nepal- 24 Hours News
Khabar24nepal : 24 Hour News